2018 မှာမျှော်နေမိတဲ့ Open World တစ်ချို့ – REDPlayer
[SIE bend Studio]
နောက်နှစ်အတွက်ပေါ့၊ ဒီနှစ်ထဲမှာတော့ ဂိမ်းအတော်များများလည်းဆော့ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ အားရတာ အားမရတာတွေနဲ့တော့ ရောထွေးနေခဲ့တာပါပဲ။ သေချာတာကတော့ မထင်မှတ်ထားတာတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေခဲ့တဲ့ 2017 ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ခုအချိန်မှာ ကျွန်တော်ကတော့ open world တွေဓါတ်ကျနေတာဆိုတော့ နောက်နှစ်ထဲမှာ ထွက်လာတော့မယ့် open world တစ်ချို့ကို စုစည်းပေးလိုက်ပါတယ်။ အများစုကထွက်မယ့်ရက် မသတ်မှတ်သေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီဂိမ်းတွေကို trailer ကြည့်ထားတာ 2016 လောက်ကတည်းကဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ခုတော့ remind လုပ်တဲ့သဘောပေါ့။
SONY Interactive Entertainment ကနေ PS4 အတွက် ထွက်ရှိလာမယ့် Marvel’s Spiderman ကတော့ gameplay တွေကြည့်ရင်းနဲ့ပဲ PS4 player တွေကို “မလိုနာ” စရာကောင်းပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၄နှစ်ကတည်းကကြည့်ခဲ့ရတဲ့ teaser ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း developer အယောက် 40 လောက်နဲ့ စီစဉ်မှုတွေလွဲလို့တိုင်ပတ်နေတဲ့ ဒီဂိမ်းက နောက်နှစ်ထဲမှာတော့ တကယ်ပဲထွက်ရှိလာတော့မယ်ပြောပါတယ်။
Open world အကြီးကြီးမှာ Javelin exo suit ထဲဝင်ပြီးတော့ critter တွေနဲ့ တိုက်ရခိုက်ရမယ်၊ multiplayer လည်းရမယ်ဆိုရင် ဒီဂိမ်းကို လက်မလွှတ်သင့်ပါဘူး။
Zombie game တွေထဲမှာ ဇာတ်လမ်းနဲ့ gameplay ပိုင်းကိုသဘောကျစရာအလွန်ကောင်းတဲ့ ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ serious ဖြစ်တဲ့အတွက် drama ခင်းထားတာလေးတွေလည်းလှတယ်ပြောရမယ်။
Hideo Kojima ရဲ့ ဂိမ်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ပဲ လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ ဂိမ်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ Games Award မှာချပြသွားခဲ့တဲ့ ကိစ္စတွေကိုစပြီး စိတ်ကူးယဉ်လို့တော့ ရနေပြီထင်ပါတယ်။
GTA ထပ်ထွက်မလာနိုင်တဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်း လို့ပြောရမယ့်ဂိမ်းပေါ့။ GTA အတွက် မစဉ်းစားနိုင်လောက်အောင် ရှိတဲ့ resource တွေသုံးပြီး ဖန်တီးထားပါတယ်လို့ Rockstar ကပြောလာတဲ့အတွက် ဒီဂိမ်းမှာ ဘယ်လောက်ကြိုးစားထားလဲဆိုတာပေါ်လွင်ပါတယ်။
Action FPS တွေထဲမှာ gameplay ပိုင်းကို စိတ်ကြိုက်တိုးတက်လာခဲ့တဲ့ဂိမ်းတစ်ခုပေါ့။ ဒီတစ်ခါ ငါးမျှားလို့ပါရတော့မယ်တဲ့ဗျာ။ Campaign တွေကို multiplayer ကစားလို့ရတဲ့ အရသာကဘာနဲ့မှ မတူပါဘူး။
ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး။ ဓါးအစား ငှက်ပျောသီးကိုင်ပြီး လျှောက်သွားလို့ရတဲ့ ပင်လယ်ဓါးပြဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လေ။ multiplayer ကိုမှ Cross-platform လည်းရတယ်ဗျာ။ (Cross-platform ဆိုတာ Window နဲ့ XBox One player တွဲဆော့လို့ရတာကိုပြောတာပါ။)
နောက်ထပ် Open World တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် Open World မြေပုံက အထက်ဖော်ပြပါတွေလောက်တော့ မကျယ်လောက်ဘူးထင်တယ်။ Sand Box တွေဖြစ်နေတာလည်းရှိတယ်။ ဒီတော့ သူတို့ထွက်လာမယ့် အချိန်ကိုစောင့်ရင်း…. မျှော်ကြတာပေါ့။
နောကျနှဈအတှကျပေါ့၊ ဒီနှဈထဲမှာတော့ ဂိမျးအတျောမြားမြားလညျးဆော့ဖွဈခဲ့ပွီးတော့ အားရတာ အားမရတာတှနေဲ့တော့ ရောထှေးနခေဲ့တာပါပဲ။ သခြောတာကတော့ မထငျမှတျထားတာတှနေဲ့ပွညျ့နှကျနခေဲ့တဲ့ 2017 ဖွဈပါလိမျ့မယျ။ ခုအခြိနျမှာ ကြှနျတျောကတော့ open world တှဓေါတျကနြတောဆိုတော့ နောကျနှဈထဲမှာ ထှကျလာတော့မယျ့ open world တဈခြို့ကို စုစညျးပေးလိုကျပါတယျ။ အမြားစုကထှကျမယျ့ရကျ မသတျမှတျသေးပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ဒီဂိမျးတှကေို trailer ကွညျ့ထားတာ 2016 လောကျကတညျးကဖွဈပါလိမျ့မယျ။ ခုတော့ remind လုပျတဲ့သဘောပေါ့။
SONY Interactive Entertainment ကနေ PS4 အတှကျ ထှကျရှိလာမယျ့ Marvel’s Spiderman ကတော့ gameplay တှကွေညျ့ရငျးနဲ့ပဲ PS4 player တှကေို “မလိုနာ” စရာကောငျးပါတယျ။
လှနျခဲ့တဲ့ ၄နှဈကတညျးကကွညျ့ခဲ့ရတဲ့ teaser ပွီးတဲ့နောကျပိုငျး developer အယောကျ 40 လောကျနဲ့ စီစဉျမှုတှလှေဲလို့တိုငျပတျနတေဲ့ ဒီဂိမျးက နောကျနှဈထဲမှာတော့ တကယျပဲထှကျရှိလာတော့မယျပွောပါတယျ။
Open world အကွီးကွီးမှာ Javelin exo suit ထဲဝငျပွီးတော့ critter တှနေဲ့ တိုကျရခိုကျရမယျ၊ multiplayer လညျးရမယျဆိုရငျ ဒီဂိမျးကို လကျမလှတျသငျ့ပါဘူး။
Zombie game တှထေဲမှာ ဇာတျလမျးနဲ့ gameplay ပိုငျးကိုသဘောကစြရာအလှနျကောငျးတဲ့ ဂိမျးဖွဈပါတယျ။ serious ဖွဈတဲ့အတှကျ drama ခငျးထားတာလေးတှလေညျးလှတယျပွောရမယျ။
Hideo Kojima ရဲ့ ဂိမျးလို့ပွောလိုကျတာနဲ့ပဲ လကျမလှတျသငျ့တဲ့ ဂိမျးဖွဈလာပါလိမျ့မယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ Games Award မှာခပြွသှားခဲ့တဲ့ ကိစ်စတှကေိုစပွီး စိတျကူးယဉျလို့တော့ ရနပွေီထငျပါတယျ။
GTA ထပျထှကျမလာနိုငျတဲ့ အဓိက အကွောငျးအရငျး လို့ပွောရမယျ့ဂိမျးပေါ့။ GTA အတှကျ မစဉျးစားနိုငျလောကျအောငျ ရှိတဲ့ resource တှသေုံးပွီး ဖနျတီးထားပါတယျလို့ Rockstar ကပွောလာတဲ့အတှကျ ဒီဂိမျးမှာ ဘယျလောကျကွိုးစားထားလဲဆိုတာပျေါလှငျပါတယျ။
Action FPS တှထေဲမှာ gameplay ပိုငျးကို စိတျကွိုကျတိုးတကျလာခဲ့တဲ့ဂိမျးတဈခုပေါ့။ ဒီတဈခါ ငါးမြှားလို့ပါရတော့မယျတဲ့ဗြာ။ Campaign တှကေို multiplayer ကစားလို့ရတဲ့ အရသာကဘာနဲ့မှ မတူပါဘူး။
ဘာရယျမဟုတျဘူး။ ဓါးအစား ငှကျပြောသီးကိုငျပွီး လြှောကျသှားလို့ရတဲ့ ပငျလယျဓါးပွဆိုတာစဉျးစားကွညျ့လေ။ multiplayer ကိုမှ Cross-platform လညျးရတယျဗြာ။ (Cross-platform ဆိုတာ Window နဲ့ XBox One player တှဲဆော့လို့ရတာကိုပွောတာပါ။)
နောကျထပျ Open World တှလေညျးရှိပါသေးတယျ။ ဒါပမေယျ့ Open World မွပေုံက အထကျဖျောပွပါတှလေောကျတော့ မကယျြလောကျဘူးထငျတယျ။ Sand Box တှဖွေဈနတောလညျးရှိတယျ။ ဒီတော့ သူတို့ထှကျလာမယျ့ အခြိနျကိုစောငျ့ရငျး…. မြှျောကွတာပေါ့။
Tags console FPS newrelease pc ps4 Survival trailer videos xbox one